Ny fahasamihafana eo amin'ny fifandraisan'ny fianakaviana
Ny toe-javatra mitovitovy sy azo tsapain-tanana ao amin'ny fifandraisan'ny fianakaviana dia naorin'ny rehetra na ho ela. Na dia ireo antoko matanjaka indrindra aza dia manapotika ny filokana, satria ny iray na ny mpivady dia manomboka mitady loharanom-baovao vaovao eo anilany, izay miteraka famadihana. Noho izany, ny fiainam-pianakaviana dia mitaky loko isan-karazany, fahatsapana vaovao.
Lehilahy maro no milaza fa tia vehivavy manaiky hanaiky ny vadiny izy ireo, izay mitsangana eny an-fatana mandritra ny andro, dia mikarakara ny ankizy sy ny raharaha ao an-tokantrano. Na izany aza, ny "lahy" tsirairay dia mijery vehivavy mpandraharaha ara-barotra iray, izay mamafa ireo sakana rehetra eny an-dalana noho ny tsy fahampiana, ny fahalavorariana ary ny fahasamihafana eo amin'ny fitondran-tenany. Noho izany, ny fehin-kevitra - ny fahasamihafana amin'ny endrika ivelany, ny toetra dia hahasarika olona iray mihoatra ny iray sy ny akanjo tokana iray ary ny fankatoavana tony hatrany.
Ny fahasamihafana eo amin'ny fifandraisana dia ilaina amin'ny vanim-potoana, izany hoe mpivady tanora, ary fianakaviana "miaraka amin'ny traikefa". Ny natiora dia mametraka ny tanjon'ny mpiady sy ny mpandresy eo amin'ny olombelona, ​​tokony "hiady" amin'ny antsasany izy, fa tsy mamerina izany amin'ny fanavaozana, satria ny fanavaozana maharitra dia mahazo karazana monotone.
Ahoana no ahafahana manao karazana fifandraisana?
Ny fahasamihafan'ny fifandraisana dia mahagaga foana. Manomàna sakafo mahasalama raha tokony ho ny borscht mahazatra. Tsarovy fa ny làlana mankany amin'ilay lehilahy dia mandalo amin'ny vavony, eto ary manomboka manao fanavaozana eny an-dalana. Manaraka ny dumplings sy ny ovy - manarona latabatra miaraka amin'ny sakafo japoney (sushi, rolls, sake) na amin'ny fomba Meksikana (fitambaran'ny legioma miaraka amin'ny voatabia), hanaraka ny pasta italiana miaraka amin'ny pizza. Mazava ho azy, aza "mitsambikina" avy amin'ny lovia iray amin'ny lakozia iray mankany amin'ny iray hafa, raha tsy izany dia miteraka fikolokoloana tsinay fotsiny, fa ny fanaovana vary samihafa 1-2 isan-kerinandro dia mety.
Ilaina ny manao karazana amin'ny endrika ivelany. Andramo ny fanandramana ny sary, avy eo ny vadinao dia hahatsapa foana fa navoaka tamin'ny sipa vaovao izy. Aza hadinoina ny hiverina haingana ao an-trano, dia afaka mihaona amin'ny lehilahy ianao amin'ny akanjo hariva sy ny sakafo am-bifalinao na amin'ny fitafy bavy ary miaraka amin'ny satroka satroka mavokely.
Ny fahasamihafan'ny fifandraisana amin'ny lahy sy ny vavy
Ny fahasamihafana eo amin'ity sehatra ity dia mampitombo ny fifandraisana eo amin'ny mpivady. Misy fiantraikany be eo amin'ny lalao eo amin'ny lahy sy ny vavy ny lalao milalao, androany dia mety ho tantsambo, ary rahampitso maotina. Fitaovana samihafa sy akanjo maotera mety ho hitanao ao amin'ny fivarotana firaisana ara-nofo. Miezaha hiara-mandeha amin'io trano fivarotana io ary misafidiana andry iray miaraka amin'ny vadinao ary hijery tsara ny fijeriny. Raha jerena ny sary, raha jerena ny toetran'ny lehilahy iray, dia manaova an-tsokosoko azy amin'ny vadinao ary manaitra ity akanjo ity amin'ny manaraka.
Fialam-boly eo amin'ny lahy sy ny vavy - famantarana
Nahoana ny vehivavy no miaina ela kokoa noho ny lehilahy?
Ahoana no hanorenana fifandraisana amin'ny vadiny?
Ankamantatra amin'ny ray aman-drenin'ilay lehilahy
Nahoana ianao no tsy manoroka ny boka?
Ny fomba hanasana ny tovolahy iray hihaona?
Lincas - siropan'ny ankizy
Ny taombaovao ho an'ny ankizy 3-4 taona
Mamela ny fahavoan'ny lanjany Two Two Slim
Iza no manakaiky an'i Beyoncé mandritra ny fiterahana?
Toeran'ny sary mitsangana
Iza no hiakanjo akanjo matevina?
Plots sy vavaka ho an'ny varotra
Fihetseham-po ambany ao amin'ny vehivavy bevohoka
Rahoviana ianao no hamboly tongolo amin'ny lohataona?
Root of ayr - fananana medikaly
Ny vaksinin'ny gripa 2015-2016
Kitapo ho an'ny zazavavy iray
Ahoana no hiterahana?